FAQ - DivaMizuki
DivaMizuki sesinye oyena free ukudlala porn imidlalo jikelele kunye omnye eyona gaming uluntu ukuyiqala apha! Yonke imihla, amawaka-waka abantu kwenzeka DivaMizuki ukuphonononga zethu ezahlukeneyo scenarios, ngokusesikweni zabo ngesondo iimpawu kwaye zama ukugqiba yonke zethu free sexy quests.
Endinazo ukuhlawula ukudlala DivaMizuki?
DivaMizuki yi free ukudlala kwaye rhoqo kuza kubakho. Iqela leengcali zethu owenze ekuqinisekiseni ukuba zethu isihloko ngu ngokupheleleyo _umxholo jikelele a freemium imodeli, kodwa nabo bonke purchases ekubeni ngokupheleleyo eyodwa. Ngoko ke, ngokufutshane, uphumelele ukuba ufuna ukuthenga into, kodwa uyakwazi inkxaso nathi ukuba ufuna.
Sisebenzisa obligated yi-ezahlukeneyo umdlalo nephepha imizimba jikelele ehlabathini kuphela anike zethu umdlalo ukuba abantu abenza kwiminyaka eli-18. Ukuba obulalayo underage abantu ukuzama ukufikelela DivaMizuki, thina sebenzisa elinye ikhadi lebhanki letyala ubungqina indlela ukuqinisekisa kweminyaka bonke abadlali.
Kukho imiceli-abadlali ngaphakathi DivaMizuki?
Uyakwazi dlala DivaMizuki kuzo zozibini multiplayer kwaye omnye umdlali ifomati! Uninzi lwethu ingqalelo wenziwe ihlawulwe kwi-omnye umdlali amava, kodwa ke sikwi ucwangciso ukuze ukhuphe iqelana ezintsha imisebenzi kwaye izixhobo ukuphucula multiplayer gameplay kwi-hayi kakhulu distant elizayo – hlala usebenza!
Ewe. Ngokunjalo inkxaso ye-iOS uze Mac, DivaMizuki kanjalo sele nako kuba abantu kwi-Android izixhobo ukudlala. Ngoko ke, ixesha elide njengoko kufuneka ukufikelela ye-chrome, Safari okanye i-Firefox, uza kuba akukho imiba kufakwa phezulu DivaMizuki usebenzisa na isixhobo wena ngoko babuza. Ke fantastic iimboniselo – oko ngokwenene ngu!
Njengoko kukhankanywe ngasentla, DivaMizuki ngoku ivumela nabani na ne-umdlalo ukuba banayo i-Firefox, Safari okanye ye-chrome nakweliphi na icebo.
Ewe. Udibaniso DivaMizuki anikezwe nge HTTPS. Sathi kanjalo kuphela gcina idilesi ye email yakho, igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo hash kwi mbali – ke oko.
Ingaba mna kufuneka ufake enye into ukudlala DivaMizuki?
Akukho. Njengoko ixesha elide njengoko kufuneka i-Firefox, Safari okanye ye-chrome zincwadi, uza kukwazi ukudlala DivaMizuki ngaphandle ukukhuphela nantoni na ukuba isixhobo sakho.